မှန်တာပြော ဆဲစေပါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Drama, Essays.. » မှန်တာပြော ဆဲစေပါ	20
Posted by Courage on Jun 21, 2016 in Drama, Essays.., Think Different | 20 comments
အစကတော့လေ ဒီအရေးတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာမှမပြောတော့ဘူးလို့နေတာပဲ။ ဒါမဲ့လဲ ကျုပ်ခမျာ အရိယျာလဲမဟုတ် ပုထုဇဉ်တောင်မှ အောက်တန်းစားပုထုဇဉ်ဖြစ်လေတော့ သူများယောင်လို့ တို့မယောင်ရင် ခေတ်နောက်ကျသွားမှာစိုးလို့ ၀င်ယောင်လိုက်ဦးမယ်လေ။ ကဲ… ကဲ… ဖရုဿဝါစာကျမ်းကို အနားယူထားပြီး ဆဲဖို့သာပြင်ထားကျပေတော့။
ဘယ်နှယ့်ဗျာ… ရိုဟင်ဂျာလို့ ဟိုသံအမတ်ကခေါ်တော့ မရဘူး မခေါ်နဲ့ဆိုပြီး ဆန္ဒပြ၊ ဘင်္ဂလီလို့ခေါ်ပြန်တော့လဲ အဲ့လူမျိုးတွေက ကြိုက်ဘူးမခေါ်နဲ့ဆိုပြီး ဆန္ဒပြ၊ ကဲ ဒါနဲ့ ကြည်စေ အေးစေဖြစ်အောင် ရခိုင်ပြည်ကမွတ်စလင်လို့ ခေါ်ဖို့ပြောပြန်တော့လဲ ကန့်ကွက်လိုက်ကျတာများ ကိုယ့်ဖအေ မယားငယ်ယူသွားသလားအောင့်မေ့ရတယ် မြင်မကောင်းရှုမကောင်း။ ဒါနဲ့နေပါဦး ခင်များတို့က သူတို့ကို ဘယ်လိုခေါ်ချင်ကျလို့လဲ။ တစ်ခုတော့ပြောခဲ့မယ် ဘုရားရှင်တောင်မှ ပြည်ငြိမ်းရေးတရားဟောလို့မရတဲ့အဆုံး ဆွေတော်မျိုးတော်ဖြစ်တဲ့ သာကီဝင်တွေ သွေးချောင်းစီးတာကို မျက်ကွယ်ပြုခဲ့ရတာ။ သိပ်တော့ ပြသနာမရှာနဲ့၊ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာ တစ်ကယ်လိုချင်မှရတာ။ ကိုယ့်လုပ်ရပ်ကို ပြန်စဉ်းစား။
စကားစပ်မိလို့ပြောဦးမယ်။ ခင်များတို့တွေ အမျိုးနဲ့ ဘာသာဆိုတာကိုရော သေချာခွဲသိရဲ့လား။ အဲ့စကားလုံးနှစ်လုံးက အတူတူမဟုတ်ဘူးနော်၊ နှစ်လုံး။ အခုမြင်ရသမျှတော့ ခင်များတို့အတော်များများက သေချာခွဲပြီး မမြင်နိုင်ကျသေးဘူး။ သိသလောက်ကလေးပြောကြည့်မယ်။ အမျိုးစောင့်တရားဆိုတာ လွယ်လွယ်ပြောရရင်တော့ ကိုယ့်အမျိုးကိုချစ်ပါပေါ့ဗျာ။ ဒီတော့ဗျာ ကျုပ်က ဗမာဆိုတော့ ဗမာလူမျိုးကိုချစ်တယ်ဗျာ၊ ဗမာစစ်စစ်ရဲ့သွေး မပျက်စီးရအောင် ထိန်းသိမ်းရမယ်ဗျာ။ ဆိုတော့ကာ ကျုပ်က ကျုပ်ချစ်သူ ရှမ်းမလေးနဲ့ ယူလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်… … …။ အမယ် အမယ်… ရတာပေါ့ မျိုးနွယ်တူတွေပဲဟုတ်လား။ မဟုတ်ဘူး… သူကရှမ်းလူမျိုး ကျုပ်ကဗမာလူမျိုး… မတူဘူး။ ဘာတော့တူလဲဆိုတော့ တစ်မြေထဲနေ တစ်ရေထဲသောက်တဲ့ တိုင်းရင်းသားဆိုမှ တူတာ။ ကျုပ်ပြောနေတာက ခင်များတို့ ပြောပြောနေတဲ့ အမျိုးဆိုတဲ့စကားနဲ့ ပြောနေတာ။
ဒါနဲ့ နေပါဦးဗျ။ ကိုယ့်လူမျိုးအချင်းချင်း… ထားပါတော့ဗျာ ခင်များတို့ပြောသလို ကိုယ့်နိုင်ငံသားအချင်းချင်းပဲ လက်ထပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ အမျိုးစောင့်တရားက ဘယ်တုန်းက စပေါ်တာလဲဗျ။ မြန်မာ့ထုံးစံလို့တော့မပြောနဲ့… မြန်မာနိုင်ငံဟေ့လို့ စပေါ်ခဲ့တဲ့ ပုဂံမင်းဆက်ရဲ့ ၄၆ဆက်မြောက်မင်းဖြစ်တဲ့ နရသူ ဝေသာလီပြည်က ကုလားမင်းသမီးနဲ့ လက်ထပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ၊ ပုဂံနိုင်ငံရဲ့ နောက်ဆုံးမင်း နရသီဟပတေ့ တရုတ်မင်းသမီးနဲ့ လက်ထပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ သမိုင်းထဲမှာ အထင်အရှားရှိနေလေတော့… … … အင်းပါ… ခင်များတို့ ပြောသလိုပဲ မြန်မာ့အယူလို့ပဲထားပါတော့။
ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ ကိုယ့်တိုင်းရင်းသားမဟုတ်တဲ့ လူမျိုးတစ်မျိုးကို နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်မပေးရေးဆိုတာကိုတော့ ကျုပ်ထောက်ခံတယ်။ ဒါမဲ့ ခင်များတို့လိုတော့ ထောက်ခံတာမဟုတ်ဘူး။ ခင်များတို့ ထောက်ခံတာက ရိုးရိုးမဟုတ်ဘူး အမုန်းစကားတွေပြောပြီး ရိုက်မောင်းပုတ်မောင်း ထောက်ခံတာ။ နေကျပါစေဗျာ… သူတို့ခမျာနေစရာနေရာမရှိလို့ ကျုပ်တို့နိုင်ငံရဲ့ အဖီအစွန်းမှာ လာနေတာပဲ မေတ္တာထားပြီးနေခိုင်းလိုက်ပါ။ ဒုက္ခသည်တွေကို ကူညီကောင်းပါတယ်။ အေး… တစ်ခုတော့ရှိတယ်။ ဒုက္ခကသည်က ဒုက္ခသည်လိုနေ၊ ဧည့်သည်က ဧည့်သည်လိုနေ။ အိမ်ဦးခန်းကိုတော့ လာမကျူးကျော်နဲ့၊ အိမ်တွင်းရေးတွေကိုတော့ လာခလောက်မဆန်နဲ့။ ဒုက္ခ တစ်ကယ်ရောက်မယ့် ဧည့်သည်တွေဖြစ်သွားမယ်။
ထားလိုက်ပါဗျာ… ကိုယ့်ဘာသာကို မချစ်လို့ သူများဘာသာထဲဝင်သွားတာပဲ၊ ပြစ်ထားလိုက်စမ်းပါ။ သီတဂူဆရာတော်ကြီးစကားနဲ့ပြောရရင် “ရှားမှ ရတနာထိုက်တာ။ ပေါများနေရင် ရတနာမဟုတ်ဘူး”တဲ့။ ကျုပ်ကတော့ အဲ့စကားကို သိပ်ကြိုက်တာ။ တကယ်ပြောတာ… ဒီလိုလူတစ်ယောက် ကိုယ့်ဘာသာထဲရှိနေလို့လဲ လူများရုံကလွဲပြီး ဘာတန်ဖိုးမှရှိတာမဟုတ်ဘူး။ သူတို့က ရတနာသုံးပါးဆိုတာ စိန် နီလာ ပတ္တမြား လောက်ပဲ သိတဲ့ဟာတွေ။ ကိုယ့် ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာကို ယုံကြည်သက်ဝင်မှုမရှိတဲ့သူ များများရှိတာထက်စာရင် ကျုပ်ကတော့ တစ်ကယ့်ယုံကြည်သူနည်းနည်းရှိလဲ ကျေနပ်တယ်။ လူများပြီး ပွဲမစည်တာမျိုးတော့ အဖြစ်မခံနိုင်။ ပြီးတော့ သူတို့ကြောင့် ကျုပ်တို့ ဘာသာကြီး ညှီစော်တောင် နံသွားနိုင်သေး။
ဥပမာလေး တစ်ခုပြောပြမယ်ဗျာ။ ကျုပ်ကိုယ်တိုင် ကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့ အဖြစ်လေးပါ။ လိုအပ်လို့ပြောရတာ၊ သူတို့ကို အပုတ်ချတာမဟုတ်ဘူး… nothing personal။ ဒီလိုဗျာ ကျုပ်နယ်မှာနေတုန်းက ဘေးအိပ်က အဒေါ်ကြီးဆီမှာ သားတစ်ယောက်ရှိတယ်။ ကျုပ်သိတတ်စအရွယ်ကတည်းက သူကကိုယ်ရင်ဝတ်နဲ့မို့ ကိုယ်ရင်မျိုးလို့ ကျုပ်တို့ကတော့ ခေါ်လိုက်တယ်ဗျာ။ အထင်တော့… သူပဇင်းတောင်ခံပြီးပြီထင်ပါတယ်။ အဲ့အချိန်မှာ မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက် ရှင်လိင်ပြန်ပြီး မြင်းလှည်းမောင်းတယ်၊ မိသားစုလုပ်ကြွေးတယ်။ နောက်တော့ သူဘာသာခြားတစ်ယောက်နဲ့ အိမ်ထောင်ကျပြီး ဘာသာပါကူးသွားတယ်လို့ သိလိုက်ရတယ်။ဇာတ်လမ်းက ဒါပဲ။ ဒါမဲ့ ကျုပ်ပြောချင်တဲ့ အချက်ကဒီအချက်။ သာမဏေအဖြစ်နဲ့ နှစ်အတော်ကြာ ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက် နောက်တော့ ဘာသာပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာ ဘယ်လောက်နားဝင်ဆိုးလိုက်လဲ။ အဲ့မှာ ကျုပ်တွေးမိလိုက်တာက ‘ငါတို့ဘာသာထဲမှာ ကိုယ့်ဘာသာကို တစ်ကယ်နားမလဲတဲ့ မယုံကြည်တဲ့ အမည်ခံပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဘယ်လောက်ရှိနေပြီလဲ’ ဆိုတာ။ ဟုတ်တယ်လေ… သူတို့သာ ကိုယ့်ဘာသာရဲ့အကြောင်းကို ကောင်းကောင်းသိနေရင် The World Best Religion လို့ သပ်မှတ်ခံထားရတဲ့ ဘာသာကြီးကနေ ဘယ်လိုလုပ် တစ်ခြားဘာသာကို ကူးမှာလဲ။ ဘာသာခြားကို ဘာကြောင့် လက်ထပ်မှာလဲ။ အသိသာကြီးလဲ သူတို့တွေ ကိုယ်ကိုးကွယ်နေတဲ့ ဘာသာကို စိန်လား ကျောက်စလစ်လား ခွဲခြားမသိလို့ပေါ့။ အခြားသော စီးပွားရေးတို့ လူမှုရေးတို့ဆိုတာ ပါမွှားတွေ။ အဓိကက ယုံကြည်သက်ဝင်မှုမရှိလို့။
ဆိုလိုရင်းကတော့ဗျာ… ကိုယ့်ဘာသာကို ကာကွယ်မဟေ့လို့ လက်ခတ်မောင်းခတ်ပြီးပြီဆိုရင် အဓိကလုပ်ရမှာက ကိုယ့်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ ယုံကြည့်သက်ဝင်မှုကို မြဲသထက်မြဲအောင်လုပ်ရမယ်၊ ပြီးရင် ပြန့်ပွားရေးလုပ်ရမယ်။ ခင်များတို့အခုလုပ်နေသလို ဟိုဘာသာကလူတွေက အဲ့လိုအဲ့လိုဆိုပြီး ၀ိုင်းရိုက်စရာလဲမလိုဘူး မီးရှို့စရာလဲမလိုဘူး။ ဒီမယ် ရွှေတောင်ကြီးကို မှီအိပ်နေတဲ့သူက တစ်မတ်ရွှေလေးနဲ့ မြူဆွယ်တာလောက်ကို မမက်ဘူး။ ဒီတော့ ကျုပ်အမြင်ကတော့ ကိုယ့်ဘာသာဝင်တွေ မိရိုးဖလာအဆင့်ထက်ပိုတဲ့ ဘာသာဝင်တွေဖြစ်ဖို့က ပိုအရေးကြီးတယ်လို့မြင်တယ်။
ထားပါတော့ဗျာ… ဒီအကြောင်းတွေ ထားလိုက်ပါတော့…။
ဒါနဲ့လေ ကျုပ်တို့နိုင်ငံရဲ့ သမ္မတကြီး ဂျောက်ဂျက်ကွဲတဲ့အကြောင်းလေးပြောပါဦးမယ်။ ဘယ့်နှယ့်ဗျာ သမ္မတကြီးနှယ့် ကိုယ့်အဖေ ဆရာကြီးရဲ့ မျက်နှာကိုမှမထောက် တိုင်းတပါးသားရှေ့မှာ မျက်နှာဖြူဘာသာစကားကို ငပိသံကြီးနဲ့ ပြောစရာလားဗျာ။ သူ့ကြောင့် ကျုပ်တို့ပြည်သူတွေ ဘယ်လောက်တောင် အရှက်ရလိုက်လဲ။ ဒီနိုင်ငံက ပြည်သူတွေအားလုံးက မျက်နှာဖြူစကားကိုမပြောတတ်တဲ့ လူတွေရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာ အသားကျပြီးသားလေ။ သံရေးတမန်ရေးတွေ ဆွေးနွေးရင် ပါးစပ်ကြီးပိတ်ပြုံးပြုံးကြီးနဲ့ စကားပြန်ပြောသမျှခေါင်းငြိမ့်ပြတဲ့ လူကြီးတွေကို မြင်နေရတာ အကျင့်ပါနေပြီလေဗျာ။ ဒီနေ့စကားပြောဖို့ မနေ့ကတည်းက သူများရေးပေးထားတဲ့စကားတွေ အလွတ်ကျက်ပြီး ပြောတတ်တဲ့ (ဒါတောင် မြန်မာလိုနော်) အကြီးအကဲတွေနဲ့ နေတတ်နေပြီလေဗျာ။ အခုတော့ဗျာ… အဘထင်က ဘယ်သူမှထင်မထားသလို လက်တမ်းထိုး မျက်နှာဖြူစကားတွေ ပြောချလိုက်တော့ ကျုပ်တို့မှာ ဘယ်လောက်နေရခက်လိုက်သလဲ။
ပြောလက်စနဲ့ ဆက်ပြောလိုက်မယ်။ “ဒီမယ် အဘထင်။ ကျော်ရို့လို လူတစ်စုက မျက်နှာဖြူစကားပြောတတ်တဲ့လူထက် ပါးစပ်ကြီးပိတ် ပြုံးပြုံးကြီးထိုင်နေတတ်သူ၊ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး တက္ကသိုလ်က ဘွဲ့ရတဲ့သူထက် တိုက်ရေးခိုက်ရေး ကောင်းတဲ့သူတွေကိုပဲ ပိုကြိုက်တာဗျ… ပိုကြိုက်တာ… သိပြီလား…”
ကဲ… ကဲ… ကဲလေ။ “မိဘပြည်သူများ ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော့ကို ဆဲကြကုန်လော့”။ ။
kai says: မြန်မာတွေက.. အဲဒီနာမယ်ခေါ်တာတွေမှာ တော်တော်အားနည်းတယ်..။
ကိုယ့်လူမျိုးကိုယ်တောင်.. မြန်မာလို.. သိုးဆောင်းလို.. အင်္ဂလိပ်လို.. အင်္ဂလန်လို.. ဗြိတိသျှလို.. ဗြိတိန်လို…မျက်နှာဖြူလို..
မြန်မာ. Myanmar ခေါ်ရမလား..။ ဘားမီးစ် Burmese ခေါ်ရမလား..။ ဘားမန်း Burman ခေါ်ရမလား..။ ဗမာ Bamah ခေါ်ရမလား.. သေချာသိတာမဟုတ်..။
ပြောပစ်လိုက်…။ အဲဒီ အမျိုးချစ်သူဆိုသူတွေကို.. ပြောပစ်လိုက်..။
ဒီကမ္ဘာမယ်.. လူမျိုးနဲ့ တိုင်းပြည်နဲ့ စာနဲ့စကားနဲ့ကို.. သိုးဆောင်းလိုပြန်ရရင်.. အတူတူကြီးပေးထားတာ မရှိဘူးလို့..။
မြန်မာ-အမေရိကန်တယောက်.. မြန်မာပြည်ပြန်သောအခါ..မြန်မာတွေကြားထဲမှာ.. မြန်မာစာနဲ့ မြန်မာစကားကို မြန်မာလိုပြောရမှာ အခက်အခဲရှိနေလို့ပါ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 280
Courage says: မြန်ရိကန် အုအုရေ တားရို့က မြမာဂျဂျားပိုတောင် နားမရယ်ရော့ဘူး ဂျ
Thint Aye Yeik says: မှန်တာပြော… ရွာပြင်ထွက်ရမယ်တို့…
ဂုဏ်ယူလိုက်ပါ ဒို့မြန်မာ.. အဲ..ဗမာ.. ဒါလည်း မဟုတ်သေးပါဘူး.. ဘင်္ဂါလီခေါ်လည်း မကြိုက် …
ရိုဟင်ဂျာ ခေါ်တော့လည်း ဒေါသထွက်…
မွတ်စလင် ခေါ်တော့လည်း စိတ်တိုင်းမကျ…
ဒါဖြင့်… သူတို့ စိတ်တိုင်းကျ အခေါ်အဝေါ်တစ်ခု သတ်မှတ် တီထွင်ပြီး ခေါ်ကြ….
ဒါကျတော့လည်း.. အဲ့လို အမည်ဝေါဟာရ သတ်မှတ်တယ်ဆိုတာ.. ဘာသာဗေဒပညာရှင်တွေအလုပ်ကွ…ဆိုပြီး… ဟို လက်ညှိုးထိုး ဒီလက်ညှိုးထိုး ဖြစ်အုန်းမယ်…
Courage says: မြန်မာလဲမဟုတ် ဗမာလဲမဟုတ်ဆိုတော့ ဟိုလို ပုဂံအနွယ်တွေလို့ခေါ် အဲ့ အာ့ဆိုလဲ တကောင်းအဘိရာဇာဆိုပြီ ကန့်ကွယ်မှာစိုးရသေး။ ဒါဆိုလဲ တကောင်းအနွယ်လို့ခေါ် ဟုတ်သေးပါဘူး အာ့ဆိုလဲ မြန်မာအစ ပျူကဆိုပြီး ပြောမှာစိုး။
အားးးးးးးးးးးးးး သိတော့ဘူးဗျာ ခေါင်းမီးပဲတောက်တယ်
အောင် မိုးသူ says: ဘာမှ မပြောလိုတော့ပြီ
Courage says: Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1374
၀င့်ပြုံးမြင့် says: တကယ်ပြောရင် အဲဒီ ရိုဟင်ဂျာ ကိစ္စ၊ ဘင်ဂါလီ ကိစ္စ ကောင်းကောင်းကို သဘောမပေါက်သေးဘူး။ ဖတ်လေ ဖတ်လေ ခေါင်းချာချာလည် မူးလေပဲ
kai says: အမေရိကနေ မြန်မာ – အမေရိကန်တယောက်.. မြန်မာပြည်ပြန်သောအခါ..မြန်မာတွေကြားထဲမှာ.. မြန်မာစာနဲ့ မြန်မာစကားကို မြန်မာလိုပြောရမှာ အခက်အခဲရှိနေလို့ပါ..။
အဲဒါကို အင်္ဂလိပ်လို.. ရေးပေးလေ..။
Courage says: အမှန်ကတော့… အမှန်အတိုင်းပြောရရင်… အမှန်ဆိုတော့….
လုံမလေးမွန်မွန် says: ခိုးဝင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသားများ . . . အဲ . . . အဲဒါ ဘင်္ဂလီနဲ့ မတူဘူးလား . . . မသိတော့ဘူး . . . သူတို့က ထမင်းရှင်အဖေများလို့ ခေါ်ချင်နေရင်တော့ မပြောတတ်ဘူး
Courage says: ကျော်ပြောဘူးညော် အဲ့ဂျဂါးတွေ ကျော်ပြောဘူး
ဦးကြောင်ကြီး says: အခြေအနေ သိပ်မကောင်းဘူး၊ မာမွတ်တို့ တိုက်စစ် ပိုဆင်လာမည့် အနေအထား ရှိတယ်၊ တနေ့က ယူအန်မှာထင်တ် အဲဒိကိတ်စ စစ်လျှာဇဝတ်မှုထိ မြောက်နိုင်ကြောင်း ကြေငြာချက်ထုတ်တယ်။ ယူအက်စ်၊ အနောက် အုပ်စုနဲ့ မွတ်ကဗာ အိုအိုင်စီတို့ လူကြီးခြင်းသဘောတူညီချက် gentleman agreement ထဲမှာ ဘင်္ဂါလီအရေး တချက်ပါပုံရတယ်။ ဒါကြောင့် အီးယူ၊ ယူအက်စ် နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒတွေမှာ မြန်တြံ့ကို ဘကုန်းအရေး အမြဲဖိအားပေးနေတယ်။ မြန်တြံ့နိုင်ငံဆိုတာ အာရပ်ကဗာနဲ့ ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင် ထိုးကျွေးစရာကောင်းတဲ့ ကစားကွက်တခုပဲ။ အိုအိုင်စီယာကွတ် တို့ဖက်ကြတော့ အမျိုး ဘာသာ သာသနာ ကိစ်စ ဖြစ်နေတော့ မရမက ထည့်မှာပဲ၊ ရောက်လဲရောက်နေပြီဟာ… ဆက်ထိုးဖို့ပဲကျန်တယ်။
ဘာသာရေး လူမှုရေး အမြင် ကြည့်ရင်တော့ နယ်နမိတ် အစီးအတား မရှိဘူး၊ ဒီမြေ ဒီရေ အားလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်။ နိုင်ငံရေးဖက်က ကြည့်ရင်တော့ နိုင်ငံသားခွင့်ပေးလိုက်ရင် တိုင်းပြည်မှာ ဒုတိယ အကြီးဆုံး လူမျိုးကွဲ ဘာသာကွဲ ယဉ်ကျေးမှုမတူ ကျောထောက်နောက်ခံတောင့် သိပ်စန်းစန်းတင့်တဲ့ လူမျိုးတမျိုး ပေါ်လာမည်။ လျှော့လို့မရ ခြောက်လို့မဖြစ်တဲ့ အခြေအနေပဲ။ အာဆီယံကို ထိန်းနိုင်ရင် အခြားအာရှ အင်အားကြီးနိုင်ငံ ဂျပန်၊ ကိုရီးယား၊ သြစတေးလျတို့နဲ့ ဟန်ချက်ထိန်းထားဖို့ လိုတယ်။ တလုပ်တော့ သာမန်ပဲထား သိပ်အားမကိုးနဲ့… တောင်းတာနဲ့ မြစ်ဆုံစီမာန်ကိန်း လေသံပစ်မှာ…။ အဓိက ကတော့ နိုင်ငံတွင်း စုစည်းညီညွတ်မှု အားကောင်းရင်၊ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးတတ်ရင် ပိုနေမြဲ ကျားနေမြဲ ထိန်းထားနိုင်လိမ့်မည်။ နို့မို့လို့ကတော့aလာacat ပါ အအော်ကျင့်ထားကြ။။။။။
Courage says: လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင် နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ဥပဒေအတိုင်းအတိအကျလုပ်၊ အနီရပြီးသားလူတွေကိုပါ တစ်ကယ့်ဥပဒေနဲ့ညီလာစစ် (ဒါက မန်းလေးက ပေါက်ဖေါ်တွေပါပါတယ်)။ ပြည်သူတွေကလဲ ရန်လိုစိတ်ထက် စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ သွေးအေးအေးနဲ့ သူတို့ရဲ့ ၀င်ရောက်မှုကိုကန့်ကွက်။ ဒီလိုပဲလုပ်ရမှာပေါ့။
လူမိုက်စကားပြောရရင် အဓိကကတော့ နိုင်ငံတိုင်းမှာ သူ့ဥပဒေနဲ့ သူလူမျိုး သူ့တိုင်းရင်းသားနဲ့ သူရှိပြီးသားလေ။ အနောက်အုပ်စုမကလို့ အရှေ့ကော အလယ်ကပါ ဘယ်လိုဖိအားပေးပေး ကိုတွေက ကိုယ့်ဥပဒေအတိုင်းလုပ်နိုင်ဖို့ပဲလိုမယ်ထင်တာပဲ။ သူတို့သည်ခိုးဝင်လား ဒုက္ခသည်လား ရှင်းအောင်လုပ် နှင်သင့်ရင်ရင် ဖြစ်နိုင်ရင် တံတိုင်းတောင်ကာလိုက်ချင်သေး။
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: .ဘင်္ဂလီခေါ်ခေါ်
Courage says: ဥပဒေနဲ့မညီပဲ နိုင်ငံသားဖြစ်သွားခဲ့တဲ့သူတွေကိုပါ ပြန်စစ်စေချင်တာပဲ။ ဟိုနေ့ကတောင် ဖဘမှာ ကုလားမကြီး ၂၀၁၅ထုပ်ပေးရက်စွဲနဲ့ အနီကိုင်ထားတဲ့ပုံတွေ့လိုက်သေး။ ဒါမျိုးက မန်းလေးက တရုတ်တွေမှာလဲရှိတယ်။ ဗမာစကားမတတ် မြန်မာဆိုတာဘာမှန်းမသိပဲ နိုင်ငံသားဖြစ်နေတဲ့ဧည့်သည်တွေကိုတွေ့နေရတာ စိတ်တောင်နာတယ်
uncle gyi says: အိမ်တွင်းကတံခါးဖွင့်ပေးသူတွေရှိနေသမျှ
Courage says: ဟုတ်ပါ့ အန်ကယ်ကြီး
ဂျစ်စူ says: အေးလေ အေးလေ
မဲမဲကြီးတွေတော့ ဒို့အမျိုးထဲ မထည့်နိုင်ပေါင် ☺
ဖြူဖြူချောချောလေးဒွေဆို တော်သေး အဟေးဟေး
အမှန်က လူ့ခွင့်ရေး အပြည့်ရှိတဲ့
သဂျီးတို့ အမေဒကန်ပို့သင့်တာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 280
Courage says: ကကြီးသားလေးတွေ
may july says: ဆဲ တတ် ၀ူးး
မ မှန် တာ ပြော တဲ့ လူ ဒေ လက် အောက် မှာ နေ တာ ကြာ လာ လို့